विप्लवमाथि प्रतिबन्ध : के भन्छन् विज्ञ, विश्लेषक र राजनीतिज्ञ ? | Ratopati
काठमाडौँ– रेशम चौधरी, चन्द्रकान्त राउत (सीके) हुँदै विप्लव प्रकरणले मुलुकको राजनीति तातेको छ । पछिल्ला यी तीन घटना र परिघटनाले मुलुक अब कतातिर जान्छ भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको छ । एकथरीले सरकारले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिस्थितिलाई काबुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले विप्लवले राजनीतिक बाटोबाटै अघि बढी अवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा रातोपाटीले राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूसँग अबको राजनीतिक कोर्ष कसरी अघि बढ्ला र समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्ला भनेर प्रतिक्रिया लिएको छ :
बालकृष्ण खाँण,नेता नेपाली काँग्रेस
विप्लव नेतृत्वको पार्टीविरुद्ध सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्नुपर्छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टी पनि वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपर्छ ।
हामीले विप्लव नेतृत्वको पार्टी र सरकारबीच वार्ता गराउन साउन भदौदेखि प्रयत्न गर्यौँ । त्यसमा अरूको भूमिका निर्णायक होला तर हामीले पनि प्रयत्न गरेका हौँ । त्यसपछि सोमनाथ पाण्डेको वार्ता समिति बन्यो । त्यो समिति बनेको घोषणा भएको दोस्रो दिनमा नेकपा नेतृ उमा भुजेललाई गिरफ्तार गर्यो, सरकारले । त्यसको केही समयपछि पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका समाचार आए । त्यसपछि विप्लव नेकपाका साथीहरुलाई वार्ताका लागि औपचारिक निर्णय गरेर टोली खटाउन पर्यो भन्यौँ । तर, विप्लव नेकपाले पनि खासै मतलब गरेन ।
अहिले जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, सीके रावतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राज्यले वैधानिकता दिने । विप्लव नेकपाले केही तोडफोड गर्यो भन्दैमा प्रतिबन्ध नै लगाउने ? राज्य नै कब्जा गरिहाल्ने अवस्थामा विप्लव नेकपा हो त ? हामीलाई हो भन्ने लाग्दैन ।
प्रहरी प्रवक्ताले विप्लव नेतृत्वका नेता कार्यकर्ता जहाँ भेट्यो त्यहाँ गिरफ्तार गर्ने भनेर बोल्नुभएको छ । त्यसको अर्थ विप्लव नेकपाका मान्छेलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ गोली हान्ने हुनसक्छ, हाम्रो जनयुद्धको अनुभवमा । गोली हान्ने भइसकेपछि मुठभेड सुरु हुन्छ । त्यसपछि विप्लव नेकपाले के गर्छ त ? भौतिक प्रतिरोध गर्छ वा बन्द हड्ताल जस्तै अहिलेसम्म जे गरेको छ, त्यो गर्छ ? यो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अहिले वामपन्थी सरकार हो । यो सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरु पनि जनयुद्ध गरेर आएका हुन् । उनीहरुलाई सबै कुरा थाह छ । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दमनमा गयो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भने कुरा उनीहरुबाट लुकेको छैन । तर शक्तिको उन्मादमा ती सबै कुरा बिर्सेर देशलाई द्वन्द्वमा फँसाउने प्रपञ्च भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बरु छलफल र वार्ताको वतावरण बनाउनुपर्ने हो । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएकाको समस्या समाधान भएको छैन । सविधान त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्छ
इन्डोप्यासिफिक योजनाअन्तर्गत यस्तो निर्णय भएको पनि हुनसक्छ
सरकारले बेठिक नै गर्यो भन्ने होइन । तर यसमा धेरै कुराको विचार र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले चारवटै सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल गिरेको छ । हामीलाई मानव अधिकारले गाँजेको छ । राष्ट्रिय एकता छैन । प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरु एकै ठाउँमा डिनर खादैमा एकता छ भनेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । त्यो गलत हो । एकता भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
अरू देश इजरायल पाकिस्तानलगायतका देशमा त्यस्तो हुँदैन । सबै सुरक्षा संयन्त्रहरुबीच एकरूपता र एकता हुन्छ । तर यहाँ यस्तो अवस्थामा सरकारले सस्तो तरिकाले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएको जस्तो अनुभूत भएको छ । पर्याप्त होमवर्क नगरी वा सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबोलाई यो निर्णय गरिएको हो भने भोलि यसले गम्भीर समस्या पैदा नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
प्रहरीभित्रै तीन चारवटा दल छन् । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला पनि सेना परिचालन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा दलहरुमा एकरूपता हुन सकेन, जसका कारण माओवादीहरु बढे, बढाइए । अहिलेको सरकारले पनि कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित तेस्रो पाटीसमेतसँग छलफल गरेर मात्रै यो निर्णयमा पुगेको भए राम्रो हुने थियो । त्यो के गरेका छन्, थाहा हुने कुरा भएन । एकपक्षीय रूपमा सरकारको मात्रै निर्णय हो र भोलि अरू दलले हामी सहभागी या सहमत नै थिएनौँ भनेको खण्डमा अवस्था झन् जटिल बन्न सक्छ ।
सरकारले सीके राउत प्रकरणको फेस गर्न नसकेका बेला यो मुद्दा ल्याएर जनताको मनोभावना डाइभर्ट गर्न खोजेको पनि हुन सक्छ । तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली वा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भन्दैमा प्रहरीहरु लड्न र भिड्न जालान् भन्ने मलाई लाग्दैन । इन्डोप्यासिफिक योजनाअन्तर्गत यस्तो निर्णय भएको पनि हुनसक्छ । यदि त्यस्तो हो भने भरतले विप्लवलाई सहयोग गर्यो भने अवस्था झन् खतरनाक नहोला भन्ने सकिँदैन ।
विश्वभक्त दुलाल 'आहुती', वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीले राखेका माग राजनीतिक हुन् होइनन्, वैचारिक हुन् होइनन् भनेर छिनोफानो गर्नुपर्यो । सबैलाई थाहा छ– ती राजनीतिक विषय हुन् र वैचारिक छन् । अरू पार्टीसँग मतभेद हुन सक्छन् । ती मतभेदहरु वैचारिक र राजनीतिक प्रकृतिका हुन् । वैचारिक र राजनीतिक मतभेद राख्दा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय राज्य आफैले त्यो विषयलाई राजनीति नै ठानेन । त्यसमा सरकारले गलत गरेको छ । राजनीति नै नठानेको हो भने बेलाबखत वार्ता गर्न आउनुपर्यो भनेर किन भनेको ? वार्तासार्ता केही गर्नु छैन । आफूले गर्न नसकेको हो भने नागरिक समाजसँग सहयोग लिन सक्थ्यो । त्यसो पनि गर्नु छैन । अनि त्यतिकै प्रतिबन्ध घोषणा गर्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्यमान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिएको ठहर छ । यस्तो तरिका ठीक भएन । यसले फरक विचार राख्न मान्छे र समूहमाथि जे पनि गरिदिने देखिन्छ । अन्ततः योे फरक विचार राख्नेमाथि दमनको दिशामा जने खतरा भयो । त्यस कारणले पनि यो निर्णय गलत छ । यो निर्णयलाई सच्याइनुपर्छ । अगाडिका घटनाको क्रममले पनि बताउँछ । ०६४ मा रौतहटमा व्यापक नरहत्या भयो । तर त्यो राजनीतिकका कारणले भएकाले त्यत्रो ठूलो नरसंहारलाई पनि वार्ता प्रक्रियाबाट हल गरियो । राजनीतिक र वैचारिक रूपमा असहमति हुँदा कैयौँ घटना हुन्छन् । त्यसलाई राज्यले धैर्यतापूर्वक हल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा माओवादी आन्दोलनकर्तासँग वार्ता गर्नका लागि बीचको माध्यमबाट नागरिक समाजका मान्छेहरू पटकपटक संलग्न रहेका थिए । अहिले त त्यो स्तरको समस्या पनि होइन । सरकारले गर्यो तर वार्तामा आउनुपर्ने समूह आइदिएन भन्नु मूर्खता हो । यसले सरकार आफै युद्धतिर जान खोजेको देखियो । केके भयो भने प्रतिबन्ध गर्न मिल्ने ? केके भएन भने नमिल्ने भन्नेबारे छलफल गर्नु जरुरी थिएन र ? राजनीति गर्न पाउने अधिकार सरकार एक्लैले ल्याएको होइन । यो विगतदेखि अहिलेसम्म गरिएको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । सरकारको कदम समधानको उपाय पनि होइन । यसले त विकृति निम्त्याउँछ । गृहयुद्ध र नरसंहारको अवस्था आउन सक्छ । जनताले दुःख पाउँछन् । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर ठूलो गल्ती गरेको छ । अहिले केही भएको छैन । सरकार यो निर्णय सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ । राजनीतिक र वैचारिक मतभेदलाई राजनीतिक तवरबाट समधानको दिशा खोज्नुपर्छ । सरकारबाट सम्भव नभए नागरिक समाजको सहयोग लिनुपर्छ ।
विष्णु सापकोटा, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा द्वन्द्व विशेषज्ञ
अजय शर्मा, वामपन्थी नेता तथा विश्लेषक
विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाउने जुन निर्णय सरकारले गर्यो, त्यो अत्यन्तै गलत छ । त्यसलाई मैले सामाजिक–फासीवादी कदमको रुपमा लिएको छु ।